Ungayenza kanjani i-tic-tac-toe elula futhi engabizi kakhulu | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Ungayenza kanjani i-tic-tac-toe elula futhi engabizi
U-Irene Gil | | Yezandla, Imisebenzi yezandla zekhadibhodi, Ubuciko bephepha
Kulokhu Ukufundisa Ngikufundisa ukudala ukuzijabulisa i-tic-tac-uzwane. Umdlalo ongadlalwa yizingane nabantu abadala, ngakho-ke encane yendlu nayo ingasebenzisana ekudalweni kwayo.
Ukuze wenze i-tic-tac-uzwane uzodinga okulandelayo izinto:
Amakhadibhodi wesendlalelo esimbili (obukhulu)
Induku emhlophe noma induku yeglue
Isiyingi sokusika esiyindilinga (kuyakhetheka)
Ukwakha ideshibhodi i-tic-tac-uzwane Qala ngokusika amakhadibhodi ngosayizi owufunayo, kepha kufanele njalo ibe yisikwele, ukuze zonke izinhlangothi zawo zilingane.
Namathisela iphepha elifakwe iphethini kuyo ngeglue emhlophe noma ngenduku yeglue, bese usika okweqile.
Ukumboza izinhlangothi, namathisela isiqeshana samakhadibhodi ombala owufunayo kuwo wonke umphetho wekhadibhodi.
Ngomshini wokusika oyisiyingi noma isikelo, dala imibuthano ephepheni lokwakha. Kumele usike eziyisishiyagalolunye ngoba zizoba yizikwele ze-tic-tac-toe. Namathisela imibuthano eyisishiyagalolunye ebhodini osanda kulidala.
Kumakhadi ungasebenzisa noma yini oyifunayo, kepha ngikhethe ukudweba amatshe kucatshangelwa izingane, ngoba kungumsebenzi abawuthandayo, banesikhathi esimnandi. Paint futhi uyihlobise ngendlela othanda ngayo, futhi isebenza ngamakhono amahle wezimoto, ngenkathi uzijabulisa.
Bapende ngopende we-acrylic noma uma ukhetha ungasebenzisa futhi i-tempera ewuketshezi.
Uma ufuna ukuwavikela kahle, sebenzisa ungqimba lwe-varnish yesiphetho osifunayo, ngoba yinto ezosetshenziswa, futhi ukudlala kungonakala futhi kulimaze upende.
Kunoma ikuphi, upende we-acrylic unamathela kahle etsheni uma linokungena, ngakho-ke uma ungasebenzisi i-varnish ungahle ungabi nankinga.
Uma unamatshe awomile ungawabeka ebhodini futhi lokhu kuzoba umphumela.
Manje usungaqala ukudlala nebhodi lakho lasekhaya le- i-tic-tac-uzwane, futhi okuhle kunakho konke ukuthi ungayiklama njengoba uthanda kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Ungayenza kanjani i-tic-tac-toe elula futhi engabizi
Amathini asetshenzisiwe kabusha e-pincushion